Nhau - Suntop otomatiki 3000W fiber laser yekucheka muchina kuiswa muFrance zvinobudirira
Suntop otomatiki 3000W fiber laser yekucheka muchina kuiswa muFrance zvinobudirira
Kubva pakutsvagisa nekusimudzira kugadzira kusvika kugadzirwa, mushure memazuva makumi mana ekuedza kwevashandi vese veSUNTOP, isu takagadzirisa zvakakwana otomatiki kudyisa uye kuburitsa CNC fiber laser yekucheka muchina yakabudirira kuiswa muFrance.
Kumhanya kwekumhanyisa kurodha nekuburitsa kuri kumhanya kwazvo, inova ka2 nguva yeGerman TRUMPF cantilever mhando kurodha uye kuburitsa mumusangano mumwe chete. Mutengi anogutsikana kwazvo nehunyanzvi hweSUNTOP.
Munguva pfupi yapfuura SUNTOP yakabudirira kugadzira zvakakwana otomatiki kudyisa uye kudzikisa masisitimu ane mutoro unokwanisa we2500KG iyo inokodzera gobvu uye hombe jira simbi kurodha uye kuburitsa, inozoponesa zvakanyanya mutengo wevashandi, kuita musangano kuti usatarisirwa, uye nekuisa hwaro hwakanaka hweindasitiri 4.0.
Kubva pamaonero evatambi vemusika, kupinza nekutengesa kunze kwemabhizinesi akazvimirira kwakawedzera zvakanyanya, uye basa rekushambadzira kwekunze "stabilizer" raive rakakurumbira. Dhata inoratidza kuti mumwedzi yekutanga gumi, kuunzwa uye kutengeswa kwemabhizinesi akazvimirira kwakasvika gumi nemaviri trillion yuan, kuwedzera kwe10.5%, kuverengera 46,2% yehuwandu hweChina hwekutengeserana kwekunze, kuwedzera kwe3,9 muzana poindi panguva imwecheteyo gore rapfuura. . Pakati pavo, kuendesa kunze kwaive 7.94 trillion yuan, kuwedzera kwe10.9%, kuverengera 55,4% yehuwandu hwehuwandu hwekunze; iyo yekutora yaive 4.06 trillion yuan, kuwedzera kwe9.7%, kuverengera 35% yehuwandu hwekupinza kukosha.
Tichitarisira kumberi, zvinowanzotarisirwa kuti kutengeserana kwekunze mugore rese kucharamba kuchitsiga uye kwakanaka. Tang Jianwei, muongorori mukuru wezvemari yekutsvagisa muzinda weBank yekutaurirana, akati huwandu hwekunze nemutengo wesimbi, soya uye zvimwe zvinhu zvakawanda zvakawedzera, zvichiratidza kuti kudiwa kwemumba kuchiri kushoma. Iyo yekumisikidza index ye PMI muna Gumiguru yaive 50.8%, 0.4 muzana inokwira kupfuura iyo yemwedzi wapfuura, uye yaive pamusoro peye boom uye bust mutsara kwemwedzi miviri yakateedzana. Nekudzoreredza kwekushandisa mudzimba uye kudiwa kwekugadzira, inotevera inotevera boom inotarisirwa kuenderera.
Fiber Laser Kucheka Muchina, Pipe Fibre Laser Yakacheka, Fiber Laser Pipe Kutema Muchina, China Fiber Laser Kutema Muchina, Tube Laser Kucheka, Fiber Laser Kucheka Machine,